BONSAI PODOKARPUS: GAWAARIDA IYO JARISTA, WARAABINTA IYO DARYEELIDDA DHIRTA CAGAARAN - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Bonsai waa jasiiradda Japan iyo farshaxanka Shiinaha ee miro yar oo koraya oo dhaadheer dabaq ah oo ka kooban dhirta cagaarka ah ama geedaha kale. Kaadi-soo-qaadidda waxaa badanaa loo isticmaalaa ujeedadaas. Maqaalkani waxaan eegeynaa sida loo koro, loo ilaaliyo oo loo daryeelo geedahan yar yar ee guriga.
Dhirta dwarf bonsai Podocarpus (Bonsai Podocarpus), oo ku koray baayacmushtarka, ayaa si dhakhso ah u koraya geedaha. Waxaa jira magac kale - lugaha. Waxay u kala qaybsan yihiin sagaal iyo toban caanood, oo ay ku jiraan ku dhawaad ​​laba boqol oo nooc oo dhir ah. Waxaa jira noocyo kala duwan oo kala duwan oo kala duwan oo dhirta ornamental ah. Caadi ahaan - waa geed ama xoortay, koraya min mitir kala badh, gaarey dherer laba mitir.
Podocarpus waa kuwa soo saaran, qaraabada dhow ee subocarpus waa cypress, kedar, thuja, larch, geed, geedo, araucaria, fir fircoon, mikrobiota, xargaha, yew, juniper.
Jilibku wuxuu ku yaallaa calaamadaha mugdiga ah, muraayad madow ah, iskudubarid iyo dareenka taabashada, kadibna, da'da, waxay dillaacaysaa meelaha qaarkoodna dumay. Laamaha iyo jirriduhu waa kuwo toosan, sidoo kale waxay ku adag yihiin da'da. Caleemaha cagaaran ee madow ma aha cirbad-qaabaysan, laakiin qaabka xarkaha, toosan, laakiin waxaa laga yaabaa in uu yahay qaab-qaabeeya. In dhererka u gaaraan 7-15 cm iyo 10 cm width. Waxay leeyihiin baraf dhalaalaya dhinaca hore.
Qorshaha caleemaha ee laamiyada qaar ka mid ah subocarpuses ayaa ku jira duufaan, kuwa kale - laba saf oo horjoogsanaya. Geedaha ubaxyada leh ubaxyo shumac ah oo labadaba ah, laakiin noocyada qaar waa ubaxyo monoecious ah. Hoyga, ubaxyada iyo miro-dhiska caadi ahaan ma dhicin, laakiin xitaa iyaga oo aan lahayn, dhirtu waxay u egyihiin qurxinta iyo soo jiidashada. Qaar ka mid ah cagaha ayaa ku koray beerta, iyo berry ay u tixgeliyaan la cuni karo. Miraha waa guduud, buluug ama guduud, waxay ku habboon yihiin isticmaalka sida ceeriin ama la kariyey. Dhadhanka midhaha waa mid macaan, oo leh gudaha dhegta.
Inkastoo muuqaalka soo jiidasho leh iyo dhadhanka, waxay leeyihiin qaar ka mid ah sunta, sidaas darteed waxay u baahan yihiin in la cuno cunnooyin badan. Daawooyinka Aasiyada Aasiyada Aasiya, waxay si weyn u isticmaalaan.
Ma taqaanaa? Bonsai ugu da'da weyn waa in ka badan 500 sano. Waxaa loo magacaabay "geedo saddexaad jiilka Tokugawa". Dukumiintiyadu waxay xaqiijinayaan in Emperor Tokugawa Iemitsu (oo xukuma 1623-1651) uu bilaabay inuu soo saaro, ka dib markii geedka loo gudbiyay madax kasta oo xiga ee Japan.
Baro sida loo koro qoryaha, qoryaha, juniper, dhoobo dheriga.
Dabiiciga ah ee kobcinta subkobaraha geela ee Shiinaha qadiimiga ah ayaa uuraysatay laba kun oo sano ka hor, iyo lix boqol oo sanno ka dib, iyadoo soo ifbaxday Buddhism ee Japan, waxay u haajirtay waddankan, iyada oo qaadatay qaab fayow oo dheeraad ah oo falsafad ah. Wadankan, waxaa la aaminsan yahay in qoraaga abuura nooc ka mid ah noocaas oo kale waa in uu leeyahay tiro tayada ruuxi ah: dareen caddaalad, xikmad, niyad wanaag iyo raaxo.
Qiyaastii boqol nooc oo geedahaas ah ayaa ku faafay adduunka oo dhan. Meelaha ugu xiisaha badnaa ee koritaanka subcarpathus waa buuraha koonfureed ee leh cimilada kulaylaha (koonfurta New Zealand iyo Chile), jihada waqooyiga (laga bilaabo Japan ilaa Mexico), iyo koonfur bari Afrika, halkaasoo, si kastaba ha noqotee, waa in la joojiyaa hoosna maanta oo ah burburinta.
Dalka Japan, qowlaha podocarpus ee qoysku waa koray, taas oo u gudbinaysa jiilalka mustaqbalka. Wakiilada gudaha gudaha waxay ku noolaan karaan boqolaal sanadood, sidaas darteed waxay badanaa noqdaan kuwa heesahan ah.
Degaanku waxay aamminsan yihiin in geedahan yar yar, haddii si habboon loo meeleeyo guriga, si xoogan saameyn ugu yeelan karaan socodka tamarta. Waxay aaminsan yihiin in haddii aad raacdo dhaqanka Taoiste ee ururinta maskaxda (Feng Shui), markaa waxaad u horseedi kartaa socodka kuwaas oo u hogaamin kara jihada saxda ah.
Soo ogow qaababka aad u sameysid bonsai.
Dayactirka iyo daryeelka guriga
Ka hor intaanad bilaabin sii kordhin guri, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso waxyaabo muhiim ah:
Shaqadani waa mid aad u dheer oo adag, si ay u koraan geed gebi ahaanba, waxaad u baahan tahay ugu yaraan 4 sano - taasi waa muddada ay qaadanayso si ay u bi'iso miraha iyo sameyska xooggan.
Khubarada ma talinayaan in xoogaa dhicin dhirta caadiga ah ee curyaanka: si ay u koraan geedaha yar yar, waxaa ka wanaagsan inaad iibsato dhirta koraya ee cabbirka loo baahan yahay ama u adeegso abuurka.
Waxaa doorbidaya in la doorto caleemo ballaadhan, Nagi, Totara.
Ma taqaanaa? Dhirta ugu caansan ee dhirta qorraxdu waa kuwa loo yaqaan "redwoods" - maantana waxaa jira geedo ka kooban 4000 oo sano.
Sida geedka kale, bonsai indoor wuxuu u baahan yahay hawo cusub oo nadiif ah iyo sidoo kale iftiin wanaagsan. Haddii kale, kuwani ma aha geedo aad u xawaare sare leh oo si guul leh loogu kori karo balandiyada ama balakoonnada, iyaga oo dooranaya meel iyaga u gaar ah mudo gaaban oo lagu soo bandhigo qorraxda tooska ah ee qorraxda iyo heerkulka ugu fiican ee koritaankooda. Miraha cagta waa dhirta kuleylka-jecel, sidaas awgeed heerkulka habboon ee iyaga waa:
xagaaga - aan ka badnayn +20 ° S;
xilliga qaboobaha - laga bilaabo +6 ilaa +15 ° S: haddii heerkulka jiilaalka uu ka sarreyso tirooyinkaas, markaas cagaha ayaa dhiman kara.
Markaad daryeesho dhirta dhirta, waxaad u baahan tahay inaad maskaxda ku hayso in ay sahlan tahay in laga baxo dibedda, maadaama hawada dabaqa ah ay aad ugu qalalan tahay. Waxa kaliya ee ay tahay in la ogaado marka koritaanka Podocarpus ee beerta waa in ay daboosho xagaaga laga bilaabo qoraxda qorraxda, iyo jiilaalka si ay u daboosho dabaylo iyo roobab.
Waxaa jira geedo si gaar ah loogu abuuro xaalado guri, sidaas darteed uma baahna inay daryeelaan oo ay sii raagaan, inkastoo ay sidoo kale u baahan yihiin qoyaan badan, waa in laga ilaaliyaa kuleyliyaha. Qodobka kale ee muhiimka ah ee beerista geedaha yaryar ee guriga waa in aysan u dulqaadan karin qorshayaasha.
Baro maxay yihiin xeerarka guud ee bonsai sii kordhaya ee dhirta kala duwan.
Waxaa muhiim ah in la xasuusto in cimiladeena diirimaadka, maalmuhu way ka gaaban yihiin kulaylaha, halkaas oo lugta-caleemaha ku koraan dabeecadda. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la abuuro ilaha dheeraadka ah ee iftiiminta, gaar ahaan xilliga jiilaalka. Waa in la ogaadaa in noocyada kala duwan ee geedaha loo isticmaalo bonsai ay leeyihiin baahiyo kala duwan ee qadarka iftiinka, iyo sidoo kale shuruudaha kala duwan ee meelaynta. Sidaa darteed, waxaa lagugula talinayaa in aad ka hubiso khabiirada ama iibiyeyaasha dukaanka oo dhan dhamaan waxyaabahan.
Inta lagu jiro dhismaha dhirta, wuxuu u baahan yahay waraabin joogto ah, halka aan buuxin qolka dhulka hoostiisa. Ciidda waa in si joogto ah u qoyaan, xataa xilliga jiilaalka. Podocarpus jecelyihiin carrada qoyan ee xilliga qaboobaha, ma aha in geedka loo mariyo buufinta joogtada ah ee qoriga buufinta, laakiin qubeyska diirran ee caadada ah ayaa ku haboon (dhammaan walxahanas waxay khuseeyaan dhirta xaaladaha qolka).
Xilliga xagaaga, waraabinta iyo buufin waa in ka sii badan. Haddii aad dhulka u oggolaatay in lagu qalajiyo ubax, ka dibna waxaad u baahan tahay inaad ku riddo weel ballaaran oo biyo ku shubee si aad dhulka ugu dhejisid qoyaanka qoyaanka.
Waa muhiim! Biyaha cagaha biyaha tuubada caadiga ah, horey u degeen 24 saacadood si ay uga takhalusaan nadaafada koloriin.
Ciid iyo quudinta
Loogu talagalay lugaha cayayaanka waa in ay u baahdaan dhulka qoyan iyo qoyan oo qoyan. Waxaa ugu wanaagsan in la helo carrada ku habboon abuurista dhirta geedaha yaryar ee dukaamada khaaska ah. Si loo ilaaliyo koritaanka dhirta ee ugu fiican, waxaa loo baahan yahay lakabka dheecaanka.
Waxaad u baahan tahay inaad quudiso geedaha xilliga xagaaga inta lagu jiro xilliga koritaanka firfircoon, ugu yaraan 1 jeer bishiiba. Xilliga jiilaalka, dharka ugu sarreeya waa inuu dhexdhexaad ahaado. Si arrintan loo sameeyo, isticmaal bacriminta dareeraha ah ee dhirta caleemaha ah: qiyaasta lagu taliyey waxaa lagu qasi karaa biyo, xalalka soo baxaa waxaa la waraabiyaa dhoobo dhoobo ah.
Waxaad isticmaali kartaa labiska dharka iyo kan dusha labadaba. Sanadkiiba laba jeer waxaad u baahan tahay inaad quudiso qadar yar oo chelate ah.
Beddel jilbaha si aad u yar oo keliya marka geedku u baahan yahay. Sida caadiga ah nidaamkan waxaa lagu fuliyaa guga. Qalitaanka subocarpus waxaa la sameeyaa laga bilaabo Nofeembar ilaa Maarso, oo ay weheliyaan jarida hoose ee xididada Halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah talooyinka loogu talagalay transplanting geedaha dhirta:
Haddii ay kuwani yihiin tijaabooyin dhalinyaro ah, markaa waa in sanad walba la gooyaa dherer weyn, iyo geedo qaan ah dhowr sano (2-4 sano).
Waxaa ugu wanaagsan in la sameeyo dhirta dhirta, si aanay u dhibin mycelium ee boqoshaada faa'iido leh for footpod.
Marka transplanting, saddex daloolow hal xididada ayaa la gooyaa, iyo dhirta waxaa lagu dhajiyay substrate dhexdhexaad ah: ciidda loogu talagalay soo wareegidda waa inay ka kooban tahay humus of jilif cufan, oo lagu daro ciidda iyo ciid.
Sameynta dhismaha iyo xiiritaanka
Habka ugu wanaagsan ee lagu kicin karo koritaanka geedaha yaryar waa inay si joogto ah u gooyaan taajka iyo xayawaanka.
Bonsai sidoo kale waxaa laga sameeyay ficus of microcarp, boxwood, pyracanthus, Benjamin ficus, cryptomeria, Murayi, Tolstians, adeniums.
Dhirta Bonsai waxaa loo jaraa labo siyaabood:
Timo joogto ah si loo ilaaliyo qaabka hadda jira.
Isku darka si loo abuuro muuqaal iyo qaabka bonsai.
Marka kiiskii ugu horreeyay, awoodda qulqulka ee geedka ayaa la tixgeliyaa, taas oo ah, dabeecadda dabiiciga ah ee laamaha qallafsan iyo kan dambe ee koritaanka xagga sare ee qorraxda, iyadoo sii kordhaysa si aan caadi ahayn oo u daadisa caleemaha hoose iyo hoose. Si aad uga hortagto geeddi-socodka, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u xoqdo dushooda iyo caleemaha dhinaca leh maqas si ay dhirta u dib u sii daayaan nafaqooyinka qaybaha hoose iyo hoose ee taajka.
Ha ka baqin inaad si joogto ah u gooyso geedahooda, habkani waa in la fuliyaa inta lagu jiro muddada koritaankooda oo dhan. Tani waxay keeni doontaa geedaha si ay u koraan si siman oo ay u horumariyaan caleenta cufan. Haddii ay tahay geed gaaban, markaa ma aha lagama maarmaan in la gooyo, laakiin waxaa ugu fiican in la riixo gacanta.
Waa muhiim! Si geedka bonsai ka dib markii manjadu si dhaqso ah u soo kabatay oo aan waxyeello lahayn, waxaa muhiim ah in la saliido qaybaha leh iskudhaf khaas ah oo loogu talagalay processing.
Marka aad abuurayso qaab iyo foom, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso dhowr xeer oo asaasi ah:
Si aad u bilowdo, u fakarto oo aad u ilaaliso geedkaaga si aad u ogaato qaabka mustaqbalka.
Abuuri sida ugu hooseeya ee suurtogalka ah oo leh miisaan qumman: dhererka dhirta iyo dhumucda mitirka waa in lagu dheelitiraa 1: 7 (tusaale ahaan, dhexda dhexroor ah 3 cm iyo dherer 21 cm).
Dusha sare ee geedka waa in kor loo qaado.
Si bilawga ah, ciriiriga iyo caleemaha dheeraadka ah ayaa la gooyaa, maadaama ay aad ugu adag yihiin in ay toosiyaan oo qaabeeyaan.
Kobcinta dhinaca laamaha waa inay si adag ugu dadaalaan dhinaca.
Laamihii hore ee bonsai waa la saaraa, kuwa ugu yar yarna waa in laga tagaa dhinaca sare ee taajka.
Bush waa qaybta hoose ee taajka.
Qaybta ugu hooseeysa ee jirridda waxaa la tagay iyada oo aan laamaha (ilaa saddex daloolow).
Laanta ugu muhiimsan waxaa loogu talagalay in ay koraan sida ugu hooseeya ee suurtogalka ah.
Lafaatiirta oo kor u sarreeya isla markaana waxay ku yaalliin midba midka kale labada dhinac ee jirkooda, waxaa fiican in la gooyo. Isla sidaas oo kale wuxuu ku dhaqmaa aagagga ku yaal meel aad u dhow.
Marka kor loo eego, meeleynta laamaha waa in ay ahaato qaar ka mid ah dadka aan isku dhejin.
Kadib markaad gashato geedka waa in uu eegaa "saboolka" ka hor.
Iyadoo la tixgelinayo xaqiiqda ah in manjadu ay tahay geedi-socod xanuun badan oo dhir ah, wuxuu u baahan yahay nasasho 2-bilood ah ka hor hababka soo socda.
Wixii dhalid ah ee miraha ciriiriga leh, ficilada soo socda ayaa lagu sameeyaa guga ama xagaaga:
Waa lagama-maarmaan in la dhiso aqal-koronto khaas ah oo loo sameeyo geedo sii kordhaya oo joogtana heerkul diirran oo joogto ah (aan ka yareyn + 18-20 ° C).
Si aad u qariso ciidda dusha kariyaha, ha u diyaarso oo ku shub weelka diyaarka ah ee loogu talagalay Gagaashida gooynta.
Laga soo bilaabo geed caafimaad leh, gooyaa jirida dhererkeedu yahay 10-15 cm ama si taxadar leh u gooyaa cidhibta.
Si aad u budo leh biiyaha kiciyaha iyo xididada wax lagu beero ciid.
Phytohormones ee koritaanka waa in lagu daraa ciidda.
Kulaylka hoose ee khasabka ah ee ciidda.
Haddii sharciyadan oo dhan la arko, saldhigga jarista waxay qaadataa 2-3 bilood.
Baro sida loo faafiyo by gooyn ah ee spruce buluug, tui, fir.
Sida aad u arki karto, way adag tahay in la koro bonsai guriga, waa geedi socod dheer, sidaas darteed arrintani waxay u baahan tahay habka hal-abuurka ah. Xaqiiqdii, dabiiciga, dhererka wuxuu u koraa wakhti aad u dheer, iyo iskudhafka gaaban ee aan ka reeban. Sababtaas awgeed, waxaad u baahan tahay inaad hesho dulqaad badan, ka dibna waxaa suurtogal ah in lagu gaaro natiijada la rabay.
Video: Bonsai Podocarpus
Sida loo koro Podocarpus: dib u eegis
Nalalka: Iftiin iftiin leh oo qorraxda ka soo baxa.
Xaalad heerkul ah: xagaaga 17-23C, xilliga qaboobaha waxaa haboon in lagu hayo meel quruxsan heerkulkiisu yahay 15C.
Waraabinta: dhexdhexaad ah, oo leh qabow oo qabow ah xilliga jiilaalka. Ha u ogolaan in qalajinta oo dhan la qalajiyo iyo boodboodka substrate.
Qoyaan: sare. Tani waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu weyn ee sii kordhaya geedkaan. Waxay aad u dhib badan tahay hawada qalalan. Sidaa daraadeed, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo tallaabooyin loogu talagalay in la kordhiyo qoyaanka hawada - qoyaanka loo isticmaalo, dheriga dhirta ku rid shey la buuxiyo sharoobada qoyan, ha dhigin qalabka kuleylka. Daadi keliya oo biyo leh jilicsan heerkulka qolka.
Labbiska ugu sarreeya: bil kasta xilliga firaaqada firfircoon. Heerka bacriminta waa la yareyn karaa marka la barbardhigo kuwa lagu taliyey.
Hawlgalkan oo dhan waxaa sababa xiiso isboorti. Guud ahaan, waxaas oo dhan waxay ku bilaabeen xaqiiqda ah in aan lahaa laba gooyn yar oo subocarpus ah iyo wax macluumaad ah oo ku saabsan xididkooda. Waxaan helay laba ikhtiyaar oo kala duwan oo ku saabsan internetka: 1) dabacsan, ciid qoyan oo ku salaysan peat iyo kuleylka kulaylka ilaa 30 digrii, 2) isku-dar dhoobo ah iyo qabow. Fikradda muhiimka ah ayaa ka muuqatay - rooting waa mid aad u adag. Wixii ugu horeeyay, kiniin peat ah ayaa loo isticmaalay, iyo jarista ayaa u tagey boorsada heerkul ah 28-30 digrii; Qeybta labaad, dhoobada iyo ciidada iyo jarista ayaa istaagay daaqada barafka ah ee lagu dhejiyo qolka aan kululayn, halka xilliga qaboobaha ay tahay 6-10 digrii, xagaaga oo aan ka badnayn 18 jir. Midka labaad wuxuu ahaa sagaal bilood (ma xasuusto dhab ahaantii). Oo shalay ayaan helay kelyaha oo barara.
Dhinaca kale, bilowga koritaanka waxay muujinaysaa rooting, iyo dhinaca midabka, jirida fadhiya koob yar oo hufan iyo xididada aan la arki karin. Su'aashuna waa: suurtagal ma tahay in la isku dayo inuu daboolka ka saaro, si uu u bilaabi lahaa inuu si madaxbannaan u noolaado, ama xitaa intuu ku nool yahay xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo? Marka la eego in ay jirto xitaa rajada ugu yar ee uu weli ku xidhan yahay xidigo yaryar
Talooyinka caleenta caleenta ah ee 90% kiisaska - waxay ka kooban tahay xididdada. Maqnaanshaha godadka dheecaanka ee qoto dheer ee dheriga dheriga ayaa caddaynaya tan (ka dib oo dhan, ciidda qallajin karo oo kaliya 7 cm, iyo 20 cm - horeba waa god, laakiin ma jirto wax jilicsan). Rooti cillad ah ma awoodo in ay biyuhu ka shaqeeyaan - sidaas awgeed luminta turgor. Waxa kale oo aad taqaanaa sawir-qaadis. Waxaa jira iftiin - waxaan ku noolnahay, maya - waxaan ku noolnahay. Haddii xafiisku mugdi yahay oo aad rabto in cagaaran, hel ferns iyo ivy. Oo ka wareeji legterard daryeelka deriska.